सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुु¥याउने अभियानमा छौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुु¥याउने अभियानमा छौं
सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुु¥याउने अभियानमा छौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता April 16, 2019	0 151 Views
प्रधानाध्यापक– बाल विकास माध्यमिक विद्यालय घो राही, दाङ
२०१७ सालमा भारतीय सो ल्जर बो र्डले स्थापना गरे को बाल विकास प्राविमा २०७१ सालदे खि माध्यमिक तहको अध्ययन अध्यापन शुरु भएको हो । सामुदायिक विद्यालयहरु पछिल्लो समयमा खस्कदो अवस्थामा रहे पनि बाल विकास माविले संस्थागत विद्यालयसरह नै आफ्ना शैक्षिक गतिविधिहरुलाई बढाउ“दै लगे को छ । जसका कारण बाल विकास मावि अहिले सबैको रो जाइ बन्दै गइरहे को छ भने शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ भर्ना अभियान पनि शुुरु ह“ुदैछ । जसका लागि बाल विकास माविले के कस्तो तयारी गरिरहे को छ । विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ । समग्र सामुुदायिक विद्यालयहरुका शैक्षिक अवस्था र समाधानका उपाय विषयमा युुगबो धकर्मी गिरिराज ने पालीले बाल विकास माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजे न्द्रकुमार श्रे ष्ठसग गर्नुुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुुत छ । – सम्पादक
विद्यालयले नया शैक्षिक सत्रसगै कुुनै नया शैक्षिक गतिविधि थप गर्दैछ कि उही पुरानै दो हो रिदैछन् ?
शैक्षिक सत्र २०७५ को परीक्षाफल भर्खरै प्रकाशन गरे का छौं। विद्यालयले प्रकाशित परीक्षाफलको समीक्षा र मूल्यांकन गर्दै आगामी शैक्षिक सत्र २०७६ लाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन के कस्ता यो जना निर्माण गर्नुुपर्छ भन्ने गृहकार्य गरिरहे का छौं। वैशाख २ गते दे खि विद्यार्थी भर्ना शुुरु गरे स“गै ६ गते दे खि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहे का छौं। जुन काम विद्यालयले वर्षे नि गर्दै आइरहे को पनि छ। यसै शैक्षिक सत्रदे खि विद्यालय ‘स्मार्ट बो र्ड’ सहितको प्रो जे क्टर प्रयो गको अभ्यास शुुरु ह“ुदैछ। प्रो जे क्टरसहितको प्रविधियुक्त शिक्षा विद्यालयले विगत वर्षहरुबाटै सञ्चालन गरे पनि ‘स्मार्ट बो र्ड’ यही शैक्षिक सत्रदे खि नै प्रयो गमा ल्याउन लागिएको हो । यसै वर्षदे खि कक्षा ८, ९ र १० मा ‘स्मार्ट बो र्ड’ निर्माणस“गै कक्षा १–१० सम्म प्रो जे क्टर प्रयो ग गरिने छ। जसका माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराइने छ। विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रविधियुक्त बनाउन ठूलो यो गदान दिने छ। प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षा विकासमा विद्यालय यस वर्षदे खि अझ सशक्त बन्दै जाने छ।
प्रविधियुक्त शिक्षाको उपयो गिता र उपलब्धि कस्तो छ ? कि प्रविधियुक्त भन्ने मात्रै हो ?
धे रै उपलब्धि छ। हामीले प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षाको अभ्यास गरे को धे रै समय भइसके को छ। प्रविधिको प्रयो ग र विद्यार्थीहरुको इच्छाशक्तिले बाल विकास माविको शैक्षिकस्तर धे रै फे रिएको हामीले महसुुस गरे का छौं। प्रविधियुक्त शिक्षाको उपयो गिता र उपलब्धि धे रै राम्रो छ। विद्यार्थीहरुले प्रविधिको े प्रयो गका माध्यमबाट ले खे र हो इन, दे खे र पढ्ने गर्दछन्। जसले सिकाइ उपलब्धिलाई धे रै सहज बनाएको छ। प्रविधिका माध्यमबाट विद्यार्थीहरुले दे खे र पढ्ने भएकाले पढेको कुरालाई तुुरुन्तै स्मरण गर्दछन्। यसका लागि हामीले प्रविधिको प्रयो ग गरे का हौं। कक्षा १० को दुुईवटा से क्सनमा स्मार्ट बो र्ड प्रयो ग भएका छन् भने यसै वर्षदे खि कक्षा ८ र ९ मा पनि स्मार्ट बो र्डका माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराउने मनसायका साथ थप चारवटा स्मार्ट बो र्ड घो राही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ को कार्यालयस“ग माग गरे का हौं। जसको प्रभावकारी उपयो ग र उपलब्धि हामीले पाइरहे का छौं भने विद्यालयको शैक्षिकस्तरको सुधारमा पनि राम्रो टे वा पुु¥याएको छ। ने ट इन्टरने टको माध्यमबाट अध्यापन गरिरहे का छौं।
प्रविधियुक्त शिक्षाका लागि खर्च पनि उत्तिकै हो ला नि ?
प्रविधियुक्त शिक्षाका लागि विद्यालय सञ्चालनमा आर्थिक समस्या छ। जसका लागि विद्यालयले ठूलो आर्थिक व्ययभार खे प्नुपरिरहे को छ। साथै विभिन्न संघसंस्था र स्थानीय तहस“ग सहयो ग माग्नुुपर्ने स्थिति छ। तपाइ“को एउटा कक्षामा एउटा स्मार्ट बो र्ड निर्माण गर्दा कम्तिमा पनि करिब एकलाख रुपैया“ खर्च हुन्छ। यसलाई विद्यालय आफैले खे प्न सक्ने अवस्था छैन। जसका लागि हामीले सहयो गीको खो जी गर्नुु परिरहे को छ।
सहयो ग मात्रैले सम्भव छ त ?
सम्भव छ। अहिले सम्म हामीले मागे को सहयो गकै भरमा प्रविधिको प्रयो ग र विकास विद्यालयमा गरिरहे का छौं। कहीं न कहींबाट प्राप्त भइरहे को छ। यो हाम्रो सौभाग्यको कुरा पनि हो ।
सामुुदायिक विद्यालयहरुको यो अवस्था कहिले सम्म ?
सहयो ग नखो जे र सामुदायिक विद्यालयहरु चल्न सक्ने अवस्था नै छैन। न समुदायले सामुदायिक विद्यालयमाथि लगानी लगाउन सके का छन्। न राज्यले आवश्यकता अनुुरुपको लगानी लगाउन सक्छ। जसको बाध्यता सामुुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विपन्नका छो राछो रीहरुले ब्यहो र्नु परिरहे को छ। राज्यले स्वीकृति दिन्छ दरबन्दी दिदैन। बाल विकास मावि पनि त्यही हो । स्वीकृत १० सम्मको छ। दरबन्दी पा“चसम्मको मात्रै छ। प्रविधियुक्त शिक्षाको अवस्था पनि त्यही हो । जसका लागि हामीले सहयो गीको खो जी गर्दै हिड्नुपर्ने बाध्यता छ। अब सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाका बारे मा सबै जानकार नै छौं। त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। राज्यले जबसम्म सामुुदायिक विद्यालयको आवश्यकताको पहिचान र उन्नतिको खो जी गर्न सक्दैन तबसम्म यो अवस्था भो गिरहनुपर्ने बाध्यता छ। सामुदायिक विद्यालयहरुले जे गर्न पनि दाता खो ज्नुपर्ने अवस्था छ।
राज्यले माविसम्म निःशुल्क शिक्षा भने को छ तर विद्यालय सहयो गका नाममा शुल्क असुल्ने काम भइरहे को छ नि ?
हामीले अभिभावकहरुबाट सहयो ग लिइरहे का छौं। किनभने हाम्रो विद्यालय प्रावि तह पूर्ण स्वीकृतिमा छ। निमावि र मावि तह अनुमति मात्रै छ। जसका लागि हामीले अभिभावकहरुकै सहयो गका माध्यमबाट निमावि र मावि चलाउनुुपर्ने वाध्यता छ। निमावि र मावि तह सञ्चालनका लागि राज्यले अनुमति मात्रै दिएकाले निमावि र माविले दरबन्दी पाउन सके को छैन। प्रावि तहकै विषयगत शिक्षकहरुले निमावि र मावि चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। माथिल्लो तहको यो ग्यता नभएका विषयहरुमा निजी स्रो तवाट शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहे का छौं। निजी स्रो तबाटै विद्यालय सञ्चालन गर्नुुपनेर् भने को नै अभिभावकहरुबाट सहयो ग लिनु हो । विद्यालयको अन्य कुनै आम्दानीको स्रो त छैन। जसमा हामीले अभिभावकहरुलाई मर्कापर्ने गरी काम गरे का छैनौं। अभिभावकसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सहयो ग शुल्क निर्धारण गर्छ। जसका आधारमा विद्यालयले न्यून शुल्क लिने गर्दछ। विद्यालयले निमावि र मावि तह सञ्चालनको अनुमति पाए पनि दरबन्दी स्वीकृति पाउन नसक्दा यो बाध्यता भो ग्नु परिरहे को छ। अकोर् कुरा मैले जुन विषय मिलान भने ं त्यो प्रावि तहको शिक्षक जसले मावि तह पढाउन सक्ने शैक्षिक यो ग्यता छ। उसले मावि तह पढाउ‘“दै आइरहे को छ। यसरी विद्यालयले अभिभावक र शिक्षक शिक्षिकाको सहयो गमा निमावि र मावि सञ्चालन गर्दै आइरहे को छ। के ही विषयका शिक्षकहरु निजी स्रो तवाटै राखे र सञ्चालन गरिरहे का छौं। यसको अर्थ के हो भन्ने निमावि र मावि तह पूर्णरुपमा निजी स्रो तबाटै सञ्चालित छ। विद्यालयको निजी स्रो त भने कै अभिभावकहरुको सहयो ग हो ।
हे र्दा उही नै भयो नि, संस्थागत विद्यालयहरुमा पैसा तिरे र छो राछो री पढाए सरह ?
शुुल्कको कुरा हो इन, यहा शिक्षाको कुरा जो डिन्छ। जहा“ हामीले न्यून सहयो ग शुल्क लिए वापत संस्थागत सरह नै प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षा दिन खो जिरहे का छौं। पछिल्लो समय विद्यार्थी र अभिभावकहरुको रो जाइ पनि यही नै बने को छ। धे रै पैसामा गुणस्तरीय शिक्षा दिइन्छ भने त्यसलाई अन्यस“ग तुलना गरिनुहु“ुदैन। हामीले त्यसो गर्न पनि खो जे का हैनौं। हामीले विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई सजिलो बनाउन खो जे का हौं। जुन स्थानीयस्तरमै निमावि र मावि तह सञ्चालन गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई सहजता दिन खो जे को हौं। हाम्रो उद्दे श्य के हो भने सर्वसुलभ शुल्कमा सबै वर्ग समुुदायको पहु“चमा गुणस्तरीय शिक्षा पुु¥याउनुु हो ।
निःशुल्क शिक्षाको नारा एकातिर, व्यवहार अर्काे तिर भएन र ?
हो , त्यो हामी स्वीकार गछौं। अझै पनि कतिपय बालबालिकाहरुले शिक्षा पाउन सके का छैनन्। मैले अघि पनि भनिसके ं राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई भने अनुरुपको विकास गर्न सके को छैन। तर पनि समुदायले आफै सञ्चालन गरिरहे का छन्। मलाई लाग्छ निशुल्क शिक्षा भन्ने कुरा त्यो नारामा मात्रै सीमित छ। यस विषयमा बाल विकास माविको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस वर्ष मात्रै करिब २० जना विपन्नवर्ग समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क अध्यापन गराएको छ। ती बालबालिकाहरुले राम्रो उन्नति पनि गरे का छन्। हामीले शुल्क दिने अभिभावकका छो राछो रीलाई मात्रै विद्यालयमा ल्याएका छैनौं, शुुल्क दिन नसक्ने परिवारका छो राछो रीलाई पनि विद्यालय भित्र ल्याएका छौं। जसका लागि राज्य जति जिम्मे वार बन्नुपनेर् हो । त्यति बन्न सके को छैन। निःशुल्क शिक्षाको नारा लगाएर मात्रै के गर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिदैन भने । हामीले े भर्ना अभियानसगै विद्यालय बाहिर रहे का बालबालिकाहरुको खो जी समे त गरिरहे का छौं। जुन हामीले वर्षे नि गरिरहे का पनि छौं। जहा“सम्म तपाइ“ व्यवहारका कुरा गर्नुुभयो । सहयो गबिना सामुदायिक विद्यालय चल्नै नसक्ने स्थिति छ भने र मैले अघि पनि भने को थिए“। तर आर्थिक अभावका कारण गरिवका छो राछो री शिक्षाबाट बञ्चित हुुनुुह“ुदैन। त्यसका लागि हामीले पनि के ही गर्नुुपर्छ भन्ने सो चको विकास गर्नुपर्दछ ।
सामुुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर पछिल्लो समय खस्किदै गइरहे को छ। यसको सुधारका लागि के गर्नुुपर्ला ?
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार तथा उन्नयनका लागि पहिलो कुरा शिक्षकहरुमा जिम्मे वारीबो धको विकास गर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कदै जानुुमा शिक्षकहरुमा कर्तव्य र जिम्मे वारी पालना नहुनुुु हो । मैले छो टो उदाहरण दिन्छु। संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकबाट कुनै कमीकमजो री भए प्रअलाई कारवाही गर्ने अधिकार हुन्छ। सामुुदायिक विद्यालयमा त्यो छैन। शिक्षकहरुमा राजनीतिक भावनाको विकास ह“ुदै गइरहे को छ। कसैले कसैलाई के ही भन्न सक्ने स्थिति छैन। जसको नतिजा राम्रो आउन सके को छैन। वर्षे नि सामुदायिक विद्यालयहरु साघुरिदै गइरहे का छन्। यसका लागि विद्यालयलाई राजनीतिरहित शिक्षकलाई जिम्मे वारीबो ध गराउन सक्ने बनाए सामुुदायिक विद्यालय आफै फे रिन सक्छ।
शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै सामुुदायिक विद्यालयहरुले पछिल्लो समय ने पालीसगै अंग्रे जी माध्यम धमाधम सञ्चालन गरिरहे का छन् । त्यो रहर हो कि बाध्यता ?
नक्कल गर्नेहरुका लागि त्यो रहर हो । विद्यालयको उन्नति, प्रगति र विद्यार्थीको भविष्य बनाउने सो च राखे काहरुका लागि त्यो बाध्यता हो । हिजो भन्दा आज, आजभन्दा भो लि, भो लि भन्दा पर्सि क्रमिक रुपमा शैक्षिक सिकाइ र उपलब्धि बदलिदै गइरहे को छ तर समयानूकल सामुदायिक विद्यालयहरुले आफ्नो शैलीलाई फे र्न सके को छैनौं तर संस्थागत विद्यालयहरुले समयस“गै आफ्नो शैलीलाई फे र्दै लगिरहे का छन्। जसका कारण हामीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनुुपर्छ भन्ने सो चका साथ अंग्रे जी माध्यम सञ्चालन गरे का छौं। त्यो सामुदायिक विद्यालयहरुमा बढ्दो छ। जसले शैक्षिकस्तरको सुधारमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ।
अन्त्यमा, बाल विकासमै किन ?
बालविकास माविले प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षासगै विभिन्न थप क्रियाकलापहरुमा विद्यार्थीहरु लाई सहभागिता गराउने गर्दछ। नृत्य, संगीत, यो गा, ते कान्डो जस्ता शारीरिक तथा मानसिक विकासजन्य क्रियाकलाप गराउदै आइरहे को छ। सबै बर्ग समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने भएकाले बालविकास सबैको रो जाइ बनिरहे को छ। जसको श्रेय अभिभावक हुनुुहुन्छ।
Previous: प्युठानमा भर्ना अगावै पाठ्यपुस्तक
Next: रुकुमपूर्वमा दुई एफएम सञ्चालनको तयारी
राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ
समृद्ध दाङ बनाउने अभिभारा नेकपाले पूरा गर्छ
मातृशिशु स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आवश्यक छ